Xarunta Denizli Ski Center waa tan loogu jecel yahay Xirfadlayaasha Dalxiiska | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean20 DenizliXarunta Denizli Ski Center waa tan loogu jecel yahay Xirfadlayaasha Dalxiiska
23 / 01 / 2020 20 Denizli, Turkish Aegean, GUUD, TURKEY, TELPHER
garoon baraf oo cusub oo loogu talagalay xirfadlayaasha dalxiiska
Aegean ee miciinka ski ugu weyn in uu noqday mid ka mid ah cinwaanka maarmaan baakadka safarka dalxiiska, gaar ahaan dalka Turkiga Aegean iyo Mediterranean soo dhaweeyay martida, oo ay ku jiraan afar by. Xarunta Denizli Ski Center, oo lagu xusay mahadnaq hagayaasha dalxiiska iyo booqdayaasha, ayaa caan ku ah dhismaheeda iyo tayada barafka.
Xarunta Denizli Ski Center, oo ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Magaaladda Metro si ay Denizli u sheegto dalxiiska xilliga qaboobaha, ayaa dhowaan noqday mid ay doorbidaan shirkadaha dalxiiska iyo hay'adaha dalxiiska. Xarunta Denizli Ski Center, oo ku taal Bozdağ, oo ku taal xudduudda degmada Nikfer ee degmada Tavas, oo noqotay meel lama huraan ah oo ay doorbidaan xirmooyinka safarka ee shirkadaha dalxiiska, waxay bilaabeen inay martigeliyaan tobaneeyo basas dalxiis maalin kasta. Sababta oo ah inay tahay xilli dugsiyeed semester, xarunta, oo ay daadadku ku hareereeyeen booqdeyaal aad u wanaagsan, ayaa baahi weyn qaba marka loo eego fududeynta gaadiidka, adeegyada la bixiyo iyo tayada barafka. Mehmet Teke, Gudoomiyaha Dawlada Hoose ee BELTAŞ, ayaa sheegay in Denizli Ski Center ay wali tahay mid baahi badan laga qabo, iyo in shirkadaha dalxiiska ay aad u daneynayaan xarunta barafka. Teke xusay in ay ku jiraan xiriir joogto ah la dalxiiska, "muwaadiniinta lagu dooranaya our shakhsi iyo sidoo kale shirkad dalxiiska ski la Turkey ka badan baahida loo qabo," ayuu yiri.
"Denizli sidoo kale wuxuu leeyahay ra'yi xilliga dalxiiska jiilaalka"
Duqa Denizli Osman Zolan, shirkad dalxiiska Denizli Ski in uu noqday uu jecel yahay oo ka mid ah si fiican, gaar ahaan agagaarka Aegean iyo Turkey ayaa sheegay in ay sii wadi in la sooro by ay ka mid yihiin Mediterranean. Isagoo carrabka ku adkeeyay in xarunta weyn ee barafka ee Aegean ay tahay maalgashi aad muhiim ugu ah Denizli isla markaana Denizli uu cod ku leeyahay dalxiiska jiilaalka ee xarunta, ayuu yiri Madaxweyne Zolan, "Waxaan sugeynaa qof walba oo raba inuu ku raaxeysto barafka oo u boodboodo Xarunteena Denizli Ski Center".
Soo-booqdeyaashu way ku qanacsan yihiin, shirkadaha dalxiiska waxay sidoo kale ku faraxsan yihiin martida iyo khubarada dalxiiska ee ka hadlay xarunta ku taal Denizli Ski Center.
Gökhan Kırmızı (Tilmaanta Dalxiis): Denizli Ski Center ayaa aad u caan baxday sannadihii la soo dhaafay. Waxay ahayd bedel loogu talagalay shaqaalaha dalxiiska xilliyada qaboobaha waxayna aad ugu fiicneyd martidayada doonaya inay qaataan nasashada semesterka. Waxa kale oo jira xoojinta imaanshaha 15 fasax. Maanta waxaan ka nimid Marmaris anagoo wata koox 80 qof ah. Aad bay u faraxsan yihiin. Waa xarunta ugu jaban ee ka jirta garoonnada barafka ee aan booqday illaa hadda. Waxaan u maleynayaa inay gaari doonto heerar caan ah oo wanaagsan mustaqbalka. Aad bay u dhib badan tahay in la gaaro.
Mehmet İlhan (Tilmaanta Dalxiis): Waxaa jira dalab aad u sareeya oo Mu fromla loogu talagalay Xarunta Denizli Ski Center. Kuwani waa meelo qurxoon, gabaad leh iyo aag aan shil lahayn. Qiimayaashu waxay noqon doonaan kuwo aad u macquul ah dalxiisayaashayada gudaha iyo xitaa inbadan oo ah dalxiisayaasha shisheeyaha ah. Waa goob la dalbado maxaa yeelay waxay ku dhowdahay magaalooyin leh cimilo diiran sida Muğla, Aydın iyo İzmir. Muwaadiniintii aan laynay ilaa maanta ma jirin wax diidmo ah oo ay ka soo noqdeen. Waxaan u mahadcelineynaa Dowlada Hoose ee Magaalada Denizli.
Onur Orhun: Waxaan ka nimid Bodrum markii ugu horeysay. Si qurux badan. Waxaan tagnay Davraz kahor. Tani waa markii ugu horreysay ee aan u nimaadno dhinacan aad iyo aad ayaan u jeclahay. Cimilada ayaa qurux badan, tayada barafka waa mid heer sare ah. Waxaan kula talinayaa meeshan qof walba. Waan soo laaban doonnaa mar alla markii aan fursad helno.
Burak Çıtır: Waxaan halkaan uga nimid İzmir maalin un. Waxaan u nimid markii ugu horaysay waana ay aad uga badan tahay sidii aan filaynay. Waxaan u hambalyeyneynaa Denizli Dawlada Hoose ee Magaalada, waxay sameeyeen maalgashi aad u wanaagsan. Meel noocan ah ayaa looga baahan yahay gobolka. Tayada barafka waa wanaagsan tahay, jidadku waa qurux badan yihiin, waxaa kale oo jira meelo fiican oo noode-yadu ka jiraan. Waxaa jira meela sagxad leh oo loogu talagalay kuwa la yimid qoyska iyo carruurta. Suunka socodka ayaa aad u guul badan. Caafimaadka gacmaha kuwa sameeya.
Kaan Çamtepe: Waa xarun aad u fiican. Waad la imaan kartaa carruurta, waxaa jira fursado aad u wanaagsan oo loogu talagalay barashada guryaha. Qiimayaashu aad ayey macquul u yihiin. U dhawaanshaheeda ayaa aad u fiican. Waxaan ka soo nimid Izmir 3 saacadood gudahood. Tani waa wax weyn.
Ağdaş Börühan: Waxaan ka imid Lüleburgaz. Runtii waan jeclahay meeshan. Run ahaan, waxbadan kama fileynin. Wadooyinku aad ayey u dhaadheer yihiin, oo si wanaagsan loo ilaaliyay una qurux badan yihiin. Aad ayaan ugu faraxsanahay imaatinkaaga. Runtii way ka sareeysaa wixii laga filaayay. Waxaan aad u jeclaa marka loo eego tayada barafka, dhererka jidadka iyo raaxada jilicsanaanta.
Turgut Ölemez: Waxaan ka imid Van. Waxaan horey u tagnay goobo badan oo barafka lagu ciyaaro, laakiin Denizli waa mid ka mid ah kuwa leh dhabbo aad u fiican. Tayada barafka waa wanaagsan tahay, jidadku aad ayey u fiican yihiin.
Kemer's icon "Olympos teleferik"
Astaanta 'Kemer' ee "Olympos cable"
Ordu Çambaşı 15, oo ah kan ugu jeclaa dalxiiska dabbaasha, waxay martigelisay kun qof
Laba jilayaal cusub oo loogu talagalay dalxiiska dabbaasha
Ski Lovers 'jecel
Dalxiis Cusub ee Dalxiiska Guud ee Dalxiiska Guga Cambaşı
Kackar waa jacayl cusub ee ciyaaraha jiilaalka
Fikradda cusub ee dadka jecel sariiraha Palandöken
Tareenka cusub ee baabuurta waa tareenka
Dalxiis jiilaalka Denizli